Moto Z4, kuwani waxay noqon doonaan astaamaha farsamo ee ay u badan tahay | Androidsis
Dhammaan taleefannada la filayo in la sii daayo 2019, ayaa cusub Moto Z4, oo inkasta oo uusan ahayn taleefanka ugu soo jiidashada badan dhammaan heerarka sare, haddana wuxuu sii wadaa inuu istaago sababo la xiriira xaqiiqda ah inuu leeyahay Moto Mods, cunsur ka dhigaya inuu kaga duwan yahay taleefannada casriga ah shirkadaha kale ee soo saara.
Kadib Motorola Moto Z3 niyad jab markii ay suuqa la soo gashay processor Snapdragon 835, in kasta oo xaqiiqda ahayd in la filayay inay suuqa la gasho Qualcomm SoC kii ugu dambeeyay ee la heli jiray, kaas oo ahaa Snapdragon 845. Si kastaba ha noqotee, waxay u muuqataa in Moto Z4 cusub ay ku iman doonto gebi ahaanba fiitamiin leh Snapdragon 8150, ama Snapdragon 855, oo siin doona xoogaa jilicsanaan ah casriga cusub ee ka soo jeeda magaca Chicago.
Faahfaahin dheeraad ah oo ah Moto Z4
Waxa aan ilaa hadda ka ognahay aaladan cusub, ayaa ah iyadoo la haysto Snapdragon 8150 SoC waxay gali doontaa dusha sare ee taleefannada gacanta ee ugu wanaagsan sanadka 2019, iyo inay sidoo kale leedahay magaca lambarka Motorola Odin.
Ka mid ah qaababka kale, waxaan ognahay in cusub Motorola Moto Z4 Waxay yeelan doontaa 4GB RAM, waxaana sidoo kale la filayaa 32GB oo keyd ah, taas oo laga yaabo inay dhibaato ku tahay dad badan oo adeegsada oo leh dalabyo badan, iyo in ka sii badan oo ah tartanka weyn ee sumadda Mareykanku leedahay.
Ma garanayno inay yeelan doonto booska kaarka SD-ka ee yar-yar, maxaa yeelay iyada oo sidan oo kale loo kaydiyo caddaalad ayay noqon doontaa cunsur muhiim ah. Nidaam hawlgal ahaan wuu yeelan doonaa Android 9 Pie, waxayna sidoo kale yeelan doontaa Moto Mods oo horeyba caan ugu noqday moodelladii hore.
Intaas waxaa sii dheer, wararka xanta ah qaarkood waxay noo sheegayaan in soo saarista casriga cusub ee Moto Z4 ay la socon doonto mid cusub Moto Mod 5G sida add-on ee telefoonka. In kasta oo aan ku naqaanno astaamo gaar ah oo loo maro 'XDA chiso', oo ah ilo macluumaad oo aamin ah, haddana garan mayno hubaal in astaamahani ay sax yihiin. Iyada oo ay taasi jirto, waxaan haysan karnaa oo keliya samir oo aan sugi karnaa nooca Mareykanka inuu ku dhawaaqo taariikhda la bilaabayo si aan u ogaano astaamaha mobilka la filayo
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Moto Z4, faahfaahinta koowaad ayaa la muujiyay